Politika Cookies - mejorapp
Cookies dia rakitra nalefan'ny mpizara tranonkala iray ho an'ny mpitety tranonkala mba handrakitra ny hetsika ataon'ny mpampiasa ao amin'ny tranokala. Ny cookies ampiasain'ny mejorapp.net dia tsy mifandray afa-tsy amin'ny mpampiasa tsy mitonona anarana sy ny solosainy, ary tsy manome ny angona manokan'ny mpampiasa azy irery.
Misy fampahalalana bebe kokoa momba ny Cookies hita ao amin'ny: Wikipedia
Ao amin'ny mejorapp.net dia misy ny Google Analytics, izay mamorona ny cookies manokana ampiasaina fotsiny ho an'ny tanjona statistika sy famakafakana ny fihetsiky ny mpampiasa rehefa mampiasa ity tranokala ity.
Ireo mpampiasa izay tsy te handray cookies na te hampahafantarina alohan'ny hitehirizana azy ao amin'ny solosainy, dia afaka manamboatra ny navigateur ho an'io tanjona io. Ny ankamaroan'ny navigateur ankehitriny dia mamela ny fitantanana ny cookies amin'ny fomba 3 samihafa:
Tsy ekena mihitsy ny cookies.
Ho an'ny cookie tsirairay, ny navigateur dia manontany ny mpampiasa raha tokony ekena izany.
Ekena foana ny cookies.
Ny navigateur dia mety ahitana ihany koa ny fahafahana mamaritra tsara kokoa izay cookies tsy maintsy ekena ary iza no tsy. Amin'ny ankapobeny, ny mpampiasa dia afaka manaiky ny iray amin'ireto safidy manaraka ireto: mandà cookies avy amin'ny sehatra sasany; mandà mofomamy avy amin'ny antoko fahatelo; manaiky ny cookies ho tsy maharitra (fafaina izy ireo rehefa mikatona ny navigateur); avelao ny mpizara hamorona cookies ho an'ny sehatra hafa. Ho fanampin'izany, ny navigateur dia mety hamela ny mpampiasa hijery sy hamafa cookies tsirairay.
Amin'ny toe-javatra sasany, mizara vaovao momba ny mpitsidika an'ity tranokala ity aho amin'ny fomba tsy mitonona anarana na mitambatra amin'ny antoko fahatelo toy ny mpanao dokam-barotra, mpanohana na mpanadihady ho an'ny tanjona tokana hanatsarana ny serivisy bilaogy. Ireo asa fanodinana rehetra ireo dia hofehezina araka ny fepetra ara-dalàna ary hohajaina araka ny fitsipika ankehitriny ny zonao rehetra momba ny fiarovana ny angona.
Ity tranokala ity dia mandrefy ny fifamoivoizana amin'ny vahaolana samihafa izay afaka mampiasa cookies handinihana ny zava-mitranga amin'ny pejiny. Mampiasa ireto vahaolana manaraka ireto aho amin'izao fotoana izao handrefesana ny fifamoivoizana amin'ity tranokala ity. Afaka mahita fampahalalana bebe kokoa momba ny politikan'ny fiainana manokana amin'ny vahaolana tsirairay ampiasaina amin'ity tanjona ity ianao:
Ity tranonkala ity dia mety hampiantrano ny dokam-barotra, ny mpiara-miasa aminy na ny tambajotra fanaovana dokam-barotra. Ity doka ity dia asehon'ny mpizara dokam-barotra izay mampiasa cookies ihany koa hanehoana ny atiny fanaovana doka mifandraika amin'ny mpampiasa. Ny tsirairay amin'ireto mpizara doka ireto dia samy manana ny politikany manokana, izay azo dinihina amin'ny pejin-tranonkalany manokana.
Ity tranokala ity dia mampiantrano dokambarotra ho an'ny:
Google Adsense: Polisy momba ny tsiambaratelo Google Adsense - Fepetra
Azonao atao ny manamboatra ny navigateur anao mba hampahafantarina eo amin'ny efijery ny fandraisana cookies ary manaiky azy ireo tsirairay na tsia, ary koa ny fisorohana ny fametrahana azy ireo amin'ny kapila mafy anao.
Azonao atao ny mahita ao amin'ny tranokalako rohy mankany amin'ny vavahadin-tserasera hafa, ohatra isika dia mifandray amin'ny Amazon mba hahitanao ny dokam-barotra ho an'ity orinasa ity sy ny rohy mifandraika amin'ny vokatra izay handraisako ny isan-jaton'ny fividianana ataonao amin'ny orinasa. Tsy hisy fiantraikany aminao mihitsy izany. Manangona vaovao momba ny statistika ihany koa i Amazon fa amin'ny fiainana manokana. Azonao atao koa ny mamaky ny politikan'izy ireo manokana amin'ny pejy iray ihany.
Azafady, tadidio fa ny mejorapp.net dia tsy manara-maso ireo vavahadin-tserasera na tranokala, ary tsy tompon'andraikitra amin'ny atiny na ny cookies ampiasainy.